मनोज गजुरेलले गरे दोस्रो विवाह ! « Bagmati Page
काठमाडौं । चर्चित हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले दोस्रो विवाह गरेका छन् । उनले मञ्जु पोखरेलसँग विवाह गरेका हुन् । सामाजिक संजालमा एक लामो पोष्ट गर्दै गजुरेलले आफुले विवाह गरेको जानकारी दिएका छन् । मञ्जु पोखरेल नेपाल सरकारको न्याय सेवाकी अधिकृत हुन् । उनको ४ वर्ष अगाडि मीना ढकालसँग सम्बन्धविच्छेद भएको थियो ।
नवदुर्गा भवानीले सबैको रक्षा गरुन् । बडादशैँको हार्दिक शुभकामना !!